Deg Deg:Jubaland oo Markii ugu horaysay soo Iibsatay Diyaarad Khaas ah. | Ogaden24
Deg Deg:Jubaland oo Markii ugu horaysay soo Iibsatay Diyaarad Khaas ah.
Oct 5, 2019 - Aragtiyood
Sida uu Warbaahinta u sheegay Madaxwayne ku xigeenka maamul Goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan Waxaa maanta markii ugu horreysay garoonka diyaaradaha ee Sayyid Maxamed Cabdille Xasan ka degtay diyaaradii igu horeysey ee ay leedahay Dowlad goboleedka Jubbaland.islamarkaana ay soo daabuli doonto Madaxda ka qeyb galeysa Caleema Saarka Madaxweynaha Jubbaland.
Dhawaan ayay ahayd markii ay xayiraad dhanka hawada ah Jubaland saartay Dowlada Federaalka Soomaaliya,si ay u baajiso Caleema saarka Madaxwayanaha Jubland oo ay dowlada dhexe sheegtay in lagu doortay qaab aan sharciga waafaqsanayn.
Balse hadalkaan maanta ka soo yeeray Madaxwayne Ku xigeenka Jubaland ayaa waxa uu meesha ka saaray Go,aakii dowlada dhexe ,iyadoona lagu wado in dhawaan ay Kismaanyo ka qabsoonto Munaasibada Caleema saarka Madaxwaynaha Dowlad Goboleedka Jubland Axmed Maxamed Islaam.